Cristiano Ronaldo oo dalab qaali ah kala kulmay Shiinaha….(Laakiin muxuu sameeyay????) – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo dalab qaali ah kala kulmay Shiinaha….(Laakiin muxuu sameeyay????)
Byare December 30, 2016
(China) 30 Dis 2016. Horyaalka Shiinaha ayaa lacago badan ku soo jiidanaya xiddigaha kubbada cagta adduunka iyadoo ay dhawaan la wareegeen Oscar iyo Carlos Tevez oo noqday laacibka ugu mushaarka badan taariikhda kubbada cagta adduunka.
Cristiano Ronaldo ayaa la warinayaa in dalab ku kacaya 300-milyan oo euro uu kaga yimid shiinaha balse uu iska diiday sida uu sheegayo wakiilkiisa Jorge Mendes.
Oscar ayaa ku biiray kooxda Shanghai SIPG halka Carlos Tevez uu heshiis labo sano ah la galay kooxda Shanghai club Shenhua.
Ronaldo ayaa noqon karay laacibka ugu mushaarka badan ebid kubbada cagta haddii uu aqbali lahaa dalabka kaga yimid Shiinaha, balse wuu diiday sida uu sheegay Mandes maadaama aysan lacag uun dhiiro galin.
“Dalab 300-milyan oo Real Madrid iyo in ka badan 100-milyan oo euro sanadkii ayaa laacibka kaga yimid Shiinaha,” Mandes ayaa sidaa u sheegay Sky Sport Italia.
“Laakiin lacagtu ma ahan wax kasta, kooxda reer Spain ayaa ah noloshiisa.”.
Arsenal oo helaysa war fiican ka hor kulanka Crystal Palace
Lionel Messi oo loo doortay kubbad qaabeeyaha ugu fiican 2016…(Kaalintee ku jiraan Ozil iyo xarfaanta kale?)